The ọhụrụ ụdị ụzọ na-echebe n'ọbọ enweghị uwe - China Shandong Chen lu
Action:: radieshon nchedo
Ebute Ẹkot :: 0.35mmpb
nkọwapụta :: L, M, S
HA08 echebe n'ọbọ uwe (otu ihu enweghị aka uwe)
Non-aka uwe radiological nchedo uwe / ụzọ uwe nlereanya: HA08
Ọ na-bụ-eji maka nchedo nke X-ray, na onye ọrụ nwere ike ịhọrọ nchedo usoro nke dị iche iche kwa na nkọwa dị ka mkpa. (Nchedo gamma ụzarị bụ n'ozuzu 0,5 MMPB).
The ndabere size a na uwe bụ na-ajụ size. Ọ bụrụ na e nwere ndị ọzọ ọnọdụ, price ga-arịda, ime kpọmkwem oge!
Radioprotection uwe mgbochi ụzọ uwe mba ọhụrụ na-echebe ụzọ cover
N'oge, ndị kasị ultralight, ultra-mkpa na àjà ihe ọṅụṅụ-adụ nchedo ihe na ụwa; E jiri ya tụnyere yiri dị ụzọ uwe, ikwu arọ nke 25 ruo 30 percent nwere ike belata.
- ray echebe suut nwere magburu onwe na-echebe Njirimara
The ụzọ nkesa bụ nnọọ edo na nkịtị were nke-edu ndú bụghị attenuated. Nye 0,35 / 0.5mmPb ụzọ Ẹkot; Eyi-eguzogide, mfe na-ọcha n'elu ihe iji chebe gị ego na kacha ruo n'ókè;
The ọhụrụ Ọdịdị imewe nke ray echebe overskirt mgbochi ụzọ uwe
Ọ na-mere nke multi-oyi akwa ihe, na ọkachamara mmadụ Ọdịdị imewe, nke na-eme gị ala.
Nkenke n'ichepụta usoro
Enwekwa kwee efọd ahụ, lezie, inogide, ka ị na-eji obi ike;
Ray echebe uwe-echebe uwe
The style bụ mbụ na dịgasị iche iche zuru ezu
Ọgaranya na size, n'agbanyeghị na ị na-abụba na mkpa, ogologo na nkenke, mgbe niile nwere a kwesịrị ekwesị n'ihi na ị, dị ka na ịkwa akwa gị; A iri na abuo ekwekọghị, ọgaranya na agba nwere ike họọrọ, n'ụzọ zuru ezu jukwa àgwà gị.
Previous: Chen lu si radieshon na-àmà vest nwere ezigbo otu-kwadoro echebe arụmọrụ
Osote: Chen lu ọhụrụ na-echebe ụzọ roba okpu nwere ike ahaziri maka ndị ọzọ Ẹkot
China Hot Sale radieshon Uwe
Chinese X-Ray echebe Uwe
Ụlọọgwụ Jiri Rubber ebute Uwe
Ụlọọgwụ Jiri X-Ray Uwe
Import Ihe echebe Uwe
New echebe Short Uwe
New Split echebe n'ọbọ Uwe
New Type echebe Uwe
Protection x-ray ụzọ Uwe
na-echebe Medical uwe
Echebe Uwe With Import Ihe
Echebe X-Ray Uwe
Radieshon ebute Uwe
Soft Split echebe Uwe
Split echebe uwe With Import ihe
Super Soft echebe Short uwe
Super Soft Split echebe Uwe
X-Ray ebute Uwe
X-Ray echebe Short uwe